Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Ny Tetezana – The Bridge tamin’ny Aogositra 2018
Indreto lahatsoratra anaty sokajy Ny Tetezana – The Bridge, manasongadina soratra, eritreritra, fanehoankevitra ary fanadihadiana tsy nalaina tàhaka avy amin'ny fomba fijerin'ny tsirairay ao anatin'ny fikambanana Global Voices.
Tantara mikasika ny Ny Tetezana - The Bridge tamin'ny Aogositra, 2018
Ny Firafitr'ilay Horohorontany Tao Trinidad
"Sina tao anaty fahanginana aho, nivalaketraka no sady tena very hevitra tanteraka. Izay no natiora ary tsapako ho tena tao anatiny mihitsy ny tenako.".
28 Aogositra 2018
Ny fanabeazana sy ny foto-kevitra venezoelana
Mpanoratra Aglaia Berlutti · Amerika Latina
Mieritreritra izany firenena izany aho ary mahatsapa tahotra. Rehefa mandeha eny an-dàlambe maloto sy feno korontana ao Caracas aho, dia mijery ny manodidina ary tohina indray amin'ny endrik'i Chávez mijery ahy avy eny rehetra eny.
11 Aogositra 2018
Vehivavy efatra malaza tamin'ny revolisiona Syriana
Mpanoratra Leila Nachawati Rego · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Ny iray maty tany am-ponjan'ny Syriana, roa maty tany am-pialokalofana, ny hafa mbola tsy hita popoka. Mihantsy antsika tsy hanadino ny tantara manokan'ireo vehivavy Syriana efatra.
09 Aogositra 2018
Jereo ihany koa ny ao anatin'ny sisintanin'i Etazonia raha hijery feno ny fiantraikan'ny herisetran'ny ICE amin'ny mpifindramonina
Mpanoratra Hamid Yazdan Panah · Amerika Avaratra
" Any amin'ny vondrom-piarahamonina mpifindramonina aza moa izany tahotra izany miteraka hisitrisitra raha vao hoe hiantso ny polisy, hiara-miasa amin'ny manampahefana na hiseho eny amin'ny fitsarana, ary efa manomboka ho hita izany fiantraikany izany...."
08 Aogositra 2018
Misantatra Pride ny renivohitry ny karnavaly ao Karaiba
Mpanoratra Guest Contributor · Fivavahana
"Ny tena mahakivy ny mpitarika ara-pivavahana dia ny mahita fa misy ny pelaka eto amin'ity firenena ity ary tsy menatra izahay."
06 Aogositra 2018
Safa, 30 taona, Mananotena, Mitantara Amintsika Ny Fifindrany Monina Tao Siria
Mpanoratra Act For Ghouta · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
"Tadidionareo ny tantarako. Safa no anarako ary 30 izao no nahaterahako. Noroahana niala tamin'ny fonenanay izaho sy ireo zanako telo. Irery aho ankehitriny, malahelo ary ketraka."